Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || क्यान्सरमा भित्रियो अत्याधुनिक मेसिन – kayakairan.com
क्यान्सरमा भित्रियो अत्याधुनिक मेसिन
वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अत्याधुनिक मेसिन भित्राइएको छ । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा १ करोड बराबरको ‘सेल सेप्रेटर मेसिन’ सञ्चालन गरिएको हो ।
सेल सेप्रेटर (कोषिका छुट्याउने) मेसिन करिब १५ दिनअघि ल्याइएको थियो । तर, प्राविधिक नहुँदा तत्काल सुचारु हुन सकेको थिएन । भारतबाट प्राविधिक ल्याएर सेवा सुरु गरिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले अत्याधुनिक मेसिन थपिएपछि उपचारमा सहजता हुने बताए । “सेल सेप्रेटर मेसिन उच्चस्तरको प्रविधि हो”, उनले भने, “ब्लड क्यान्सर भएका बिरामीलाई यो प्रविधिमार्फत दिइने उपचार ज्यादै लाभदायी बन्नेछ ।”
उनले यो उपकरण नियमति सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा किट व्यवस्थापन गरिने बताए । “३ जना चीनमा तालिम लिइरहेका छन्”, उनले भने, “पछि थप ३ जना तालिममा जानेछन्, डेढदेखि तीन महिना तालिम लिनेछन् ।” उनले अस्पताल आइपुगेका बिरामीलाई छिटो उपचार दिन आवश्यक प्रविधि भित्राउने अभियानमा लागेको बताए । पूर्व कार्यकारी निर्देशक चिनबहादुर (सीबी) पुनको कार्यकालमा चीनबाट आएको टोलीले अस्पतालमा आवश्यक उपकरणबारे जानकारी लिएको थियो । “अब रोग परीक्षण गर्न बाहिर जाने र कुर्नुपर्ने अवस्था हटेको छ”, उनले भने, “प्रयोगशालामा आवश्यक केमिकल तथा उपकरण व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौं ।”
अस्पतालका उपनिर्देशक डा. निर्मल लामिछानेले सेल सेप्रेटर मेसिनले बिरामीमा प्लेटलेट्सको आवश्यक मात्रा तत्काल राख्न सघाउने बताए । “क्यान्सर लागेका व्यक्तिमा प्लेटलेट्सको मात्रा कम हुन्छ”, उनले भने, “कम हुँदा रक्तस्राबको खतरा हुन्छ, शरीरमा तत्काल प्लेटलेट्सको मात्रा पु¥याउन यो प्रविधि ज्यादै उपयोगी छ ।” उनका अनुसार यो प्रविधिले स्वस्थ व्यक्तिबाट रगत झिक्ने र सो रगतलाई मेसिनले आवश्यक कोष छुट्याएर पुनः त्यो रगत स्वस्थ व्यक्तिमै फिर्ता गराउँछ । बिरामीको शरीरमा भएको रगतमा अपुग तत्वमात्रै स्वस्थ व्यक्तिबाट राख्ने गरिन्छ ।
प्लेटलेट्सले रगतलाई जमाउने काम गर्छ । घाउचोटको बेलामा प्लेटलेट्स सहयोगी बन्छ । स्वस्थ व्यक्तिमा १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म प्लेलेट्सको मात्रा रहन्छ । “स्वस्थ व्यक्तिको रगतमा भएका तत्वको अवस्था सुरुमा जाँचिन्छ”, उनले भने, “निश्चित मापदण्डअनुसार कम्युटर प्रोग्रामिङ गरेर आवश्यक कोषीका मात्रै झिकिन्छ ।” यसरी कोष बिरामीमा राख्दा २ देखि ४ घण्टासम्म लाग्न सक्छ । प्याथोलोजि विभागमा यो मेसिन राखिएको छ । “ब्लड बैंकबाट छुट्टाइएको रगतमा आवश्यक मात्रा पूरा गर्न धेरै जनाले दान गरेको रगतमा निर्भर हुनुपर्छ”, अस्पतालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चिनबहादुर (सीबी) पुनले भने, “यो विधिबाट ४० देखि ६० हजार प्लेटलेट्सको मात्रा एकैपटक बढाउन सकिन्छ ।”
रगतमा हुने आवश्यक तत्वमध्ये बिरामीलाई दिएपछि पुनः रगत दिने व्यक्तिले ७२ घण्टादेखि एक हप्ताभित्र पुनः रक्तदान गर्न सक्नेछन् । “यस्तै खालको प्रविधि साधरण प्रविधि पहिला सञ्चालनमा थियो”, उनले भने, “पुरानो मेसीन बिग्रिएपछि बनाउन सकिएन, आवश्यक किट पनि पाइएन, सेवा बन्द हुन पुगेको थियो ।” नेपाल सरकारले २०५६ सालमा भित्राएको सेल सेप्रेटर मेसिन २०६२ सालसम्म क्यान्सर अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको थियो । हाल जर्मन कम्पनीको उच्चस्तरीय प्रविधि भित्राइएको छ । सर्भिस ईन्जिनियर जिनेश कुमावतले जर्मन कम्पनिको यो प्रविधि पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको बताए ।
वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा रेडियोलोजी विभागमा बिग्रिएको एक्सरे, एमआरआई मेसिन हाल सञ्चालनमा छन् । बाहिरी सेकाइको उपकरण खरिद प्रक्रियामा छ । सिटिस्क्यान सेवा पनि बिहान र बेलुका सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर अस्पतालको सेवालाई जनमैत्री बनाउन थालिएको छ । अस्पतालले हाल सरदर दैनिक ७ लाख आम्दानी गर्ने गरेको छ ।